हँसाउनेलाई मन पर्ने हास्य कलाकार
शिवराज योगी/काजी श्रेष्ठ शुक्रवार, साउन २७, २०७४ 1697 पटक पढिएको
काठमाडौं : आधुनिक युगसँगै मानिसका आवश्यकता बढेका छन् । चाहना चुलिएका छन् । इच्छा र रहरको परिपूर्तिका लागि मानिसको व्यस्तता बढेको छ । भागदौडको जिन्दगी जिउन मानिस बाध्य छ । अहिलेको मानिस न फुर्सदिलो छ, न त उसँग आफन्त, मित्रजनसँग गफिएर मन माझ्ने फुर्सद नै छ । मनका कुरा पोख्नु, हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । यो कुरा विज्ञानले नै पुष्टि गरिसकेको छ । योग गुरुहरूले नै जो हाँस्छ ऊ धेरै बाँच्छको सूत्र उच्चारण गर्ने गरेका छन् । हाँस्दा मन र तन दुवै फुरुंग हुने अनुभूति हामी स्वयंले पनि गरेका छौं ।
तर हाँस्ने कसरी ? जमाना यस्तो छ कि हामीसँग हाँस्नका लागि पनि समय छैन । यस्तैमा पनि केही व्यक्ति आम दर्शक श्रोतालाई हँसाएर मनोरञ्जनसँगै स्वास्थ्य प्रदान गरिरहेका छन् । हास्यव्यंग्यभित्रका अनेक विकृति र विसंगतिलाई फरक बहस बनाउने हो भने हँसाउने पेसामा रहेकाहरूले थकान, निराशा र तनावबाट मुक्तिका लागि ठूलो योगदान गरेको मान्नैपर्छ । दुनियाँ हँसाउनेहरू जोकसैलाई मन पर्छ, धेरथोरको कुरा होला । तर, दुनियाँ हँसाउनेहरूको मन पर्ने हँसाउने मान्छे को होला त ? त्यो हामीले बुझ्ने प्रत्यत्न गरेका छौं ।
हास्य कलाकारमा मनोज गजुरेल परिचित र स्थापित नाम हो । उनले धेरै नेताको क्यारिकेचर गरेर दुनियाँलाई हँसाएका मात्र छैनन्, जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नेतलाई दबाब पनि सिर्जना गरेका छन् । त्यसैले उनलाई दर्शकले मन पराउँछन् । तर, मनोजलाई मन पर्ने हास्य कलाकार भने 'मह' जोडी हो । उनलाई औधि मन पर्ने कलाकार हरिवंश आर्चाय र मदनकृष्ण श्रेष्ठ हुन् । वर्तमानका हास्य कलाकारमा विल्सनविक्रम राई मन पर्छन् । उनीहरूले कलाकारितासँगै समाज रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदान मनोजलाई असाध्यै मन पर्छ । मनोजको नजरमा मह जोडी एकता, समर्पण र निरन्तरताको प्रतीक हो । विल्सनविक्रम राई लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको उनी देख्छन् । ग्रामीण परिवेशको अभिनयलाई टपक्क टिपेर उनले प्रस्तुत गरेको मन पर्छ । 'यो जीवन्त अभिनय पनि हो । नेपाली माटोको अग्र्यानिक कमेडी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यो असाध्यै मन पर्छ', मनोजले भने ।
नेपालका चर्चित हास्य कलाकारमध्येका हुन् 'मुन्द्रे' अर्थात् जितु नेपाल । उनी दर्शकमाझ 'मुन्द्रे'का नामले चिनिन्छन् । उनले हास्य टेलिशृंखलामार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएका छन् । चलचित्रबाट पनि हँसाउने कर्ममा उनी सक्रिय छन् । उनले करिब तीन दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । आफैं चर्चित हास्य कलाकार भए पनि उनलाई सबैभन्दा मन पर्ने हास्य कलाकार भने 'मह' जोडी नै हो । उनी हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठका फ्यान हुन् ।
'कलाकारिता सँगसँगै उहाँहरू सभ्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ', जितुले भने, 'सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ । आफू निकटका व्यक्तिसँग घुलमिल हुन बडप्पन देखाउनु हुन्न ।' उनीहरूको नरम व्यक्ति जितुलाई मन पर्छ । हरिवंशलाई बेलाबखतमा फोन गर्दा दाइ नमस्ते भन्न नपाउँदै नमस्ते भाइ भन्नुहुन्छ रे ! जहाँ भेट हुँदा पनि माया गर्ने, हौसला दिने बानी उनलाई मन पर्छ । अरूको देखासिखी नगर्ने, कुनै पार्टीको पक्ष नलिने बानी उनलाई मन पर्छ ।
राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खाँदाखाँदै कलाकारिता सुरु गरेका हुन्, हास्य कलाकार किरण केसीले । दर्जनौं टेलिसिरियलका साथै ५० भन्दा बढी चलचित्रमा समेत अभियन गरेका केसी सदाबहार हास्य कलाकारका रूपमा परिचित छन् । उनले अभिनय मात्र नभई गीतिएल्बमसमेत निकालेका छन् । उनी आफूलाई दुईजना हास्य कलाकार मन पर्ने बताउँछन् । दुईजनाबाट एकजना छनोट गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । हरिवंश आचार्य र शिवहरि पौडेल उनलाई असाध्यै मन पर्ने हास्य कलाकार हुन् । उनको भनाइमा हास्य विधामा हरिवंशलाई मन नपराउने नेपाली नै भएन । उनको काम गर्ने शैली, दक्षता, कलाकारिता उनलाई मन पर्ने पक्ष हो । किरणको नजरमा शिवहरि पौडेल एक मूर्धन्य व्यक्ति हुन् । 'उनी क्षमतावान् व्यक्ति हुन् । हिरोको रोल पनि खेलेका छन्, मेरो जोडी पनि हुनुहुन्छ', किरणले भने ।
दीपकराज गिरी रेडियोको जमानादेखि 'रामविलास'को नामबाट परिचित नाम हो । दुई दशकभन्दा लामो हास्य कलाकारिता गरिरहँदा उनी 'छक्कापन्जा' चलचित्रमा 'राजा' भएर प्रस्तुत हुँदा झन् रुचाइए । समाज र सोच परिवर्तनमा उनको कम भूमिका छैन । तर, उनलाई मन पर्ने हास्य कलाकार भने मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य नै हुन् । कलाकारितामार्फत समाज परिवर्तन, चेतना वृद्धिमा उनीहरूको योगदान सम्झनयोग्य ठान्छन् उनी । 'यसले मलाई प्रभावित बनाएको छ ।उहाँहरूले गर्दा हामी यो स्थानमा आएका छौं', दीपकले भने, 'बिनापैसा हास्यव्यंग्य गर्दै आउनुभयो ।
उहाँहरूले हास्यव्यंग्यको बाटो बनाइदिनुभयो ।' आज आफूहरू महले बनाएको बाटोमा हिँडेको भन्न रुचाउँछन् उनी । 'त्यही बाटोमा सफलताको गाडी गुडाइरहेका छौं', उनले भने, 'उहाँहरू बौद्धिक स्तरको हास्यव्यंग्य प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । यो प्रस्तुतिको तरिकालाई हामीले सिकेका छौं । उहाँहरूबाटै सिकेर हामीले यो स्थान बनाएका हौं ।'
'धनिया'का रूपमा चिनिएकी हास्यकलाकार दीपा श्री निरौला हास्यविधा समेटिएको चलचित्र निर्मात्री बनिसकिन् । 'छक्कापन्जा'सँगै चुलिएको उनको चर्चा कम छैन । तर, उनलाई पनि मन पर्ने हास्य कलाकार भने हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ नै हुन् । उनीहरूलाई दीपा श्री हास्य क्षेत्रकै गुरु मान्छिन् । 'प्रायः सबै हास्य कलाकारले उहाँहरूलाई गुरु मान्नुहुन्छ । उहाँहरूमा जीवन्त एक्टिङ पाउँछु', दीपाले भनिन्, 'उहाँहरू पोख्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँहरू उदार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।'
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने? 2973
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलार्इ प्राथिमकता, यस्तो छ तयारी 1329
नेपाल-भारत सम्बन्ध : सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन 4554
'एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग सहकार्य' 44181
ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत 24161
आसन्न भारत भ्रमण : देउवालाई दुई प्रश्न 14
दिल्लीसँग बार्गेनिङको हैसियतमा नेपाल 876
राष्ट्रियताको बहस 406
नयाँशक्ति छाडेका नेता 'माओवादीतिरै' 6816
प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ट्‍वाइलेटमा लगेर हत्या.. 27482
खोलाको किनारमा शव भेटियो 365
आमा–आमा भन्दा भन्दै नातिनीलाई हातैबाट बाढीले बगायो.. 7215
आरजुको राहतले भूकम्पपीडित दंग 14161
न्यूनचापीय प्रणालीले मनसुन पुन: सक्रिय, मौसम बद्‌ली भइरहने 2945
काठमाडौंमा इन्टरनेटको नीति, कानूनी प्रयोगबारे सेमिनार सुरु 357
टेलिकमद्वारा कर्पोरेट युजर ग्रुप (सियुजी) सुविधालाई रिप्याकेज 1813